Slay Queen Lach နဲ့ ရေအောက်ထဲက အံ့အားသင့်စရာ အလှတရားများ In:Kawi Inspires, Self Discovery, The Fit Slay Queens
The Fit Slay Queens အဖွဲ့ရဲ့သတ္တိခဲတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Slay Queen Lach ဟာ သင်္ကြန်အားလပ်ရက်အတွင်း Gili Islands မှာ Scuba Schools International (SSI) ကနေပြီး Scuba Diving License တွေကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ အရင်က ရေအနက်ကို ကြောက်တတ်ခဲ့တဲ့ Lach ဟာ သတ္တိကောင်းပြီး Scuba Diving Beginner Level ဖြစ်တဲ့ Open Water Course (18 meters ထိ dive လုပ်ခွင့် liscense) နဲ့ Advanced Level ဖြစ်တဲ့ Advanced Adventurer Course (30 meter ထိ dive လုပ်ခွင့် license) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးလုံးအတွက် certified ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Lach အနေနဲ့ သူမရဲ့ အံ့အားသင့်စရာအတွေ့အကြုံလေးတွေကို အခုလိုဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။ “Lach အနေနဲ့ Gili Islands မှာ စုစုပေါင်း (၁ဝ) ရက်ကြာနေခဲ့ပါတယ်။ Scuba Diving အတွက် သင်တန်းကာလကတော့ beginner အတွက် အတန်းက (၃) ရက်၊ advanced အတန်းက (၂) ရက်နဲ့ စုစုပေါင်း (၅) ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ Fun dive တွေပါလုပ်ခဲ့တော့ ၆ ရက်ကြာ dive လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ပင်လယ်ထဲမှာ ၂ ကြိမ် dive လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Night Dive တို့၊ ရေစီးကြောင်းနဲ့ စီးမျောရတဲ့ (current dive) တို့တွေပါ ပါဝင်တာကြောင့် မတူညီတဲ့ dive site တွေမှာ လုပ်ခဲ့ရတော့ အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ Diving စမလုပ်ခင်က Lach အနေနဲ့ ပင်ကိုယ် ရေအနက်ကြောက်တဲ့စိတ်ရယ်၊ လှိုင်းဆွဲခံရမှာတို့၊ အောက်စီဂျင်ပြတ်သွားမှာတို့၊ ရေအောက်ထဲမှာ စိတ်လောတာတို့၊ ပင်လယ်ထဲကငါးမန်းတွေ၊ ရေဘဝဲတွေအဆွဲခံရမှာတို့ စတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ရေအောက်ထဲဆင်းတဲ့အခါမှာတော့ ထင်ထားသလိုကြောက်စရာမကောင်းတဲ့၊ အံ့သြစရာအလှတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ရေအောက်ကမ္ဘာအပေါ် အမြင်တွေပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ရေအောက်က marine life တွေ၊ corals တွေဟာ အရမ်းကိုလှပပြီး ဆန်းကြယ်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ dive လုပ်ရင် ရေအနက်ထဲမှာ ၄၅ မိနစ်လောက် ရေငုပ်ရပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ရ၁% က ရေတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် ရေအောက်ကမ္ဘာမှာ တွေ့မြင်စရာ၊ လေ့လာစရာတွေ အများကြီးရှိတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ dive လုပ်တိုင်း ၄၅ မိနစ်ကြာပြီဆို ရေပြင်ပေါ် ပြန်မတက်ချင်လောက်အောင် ပျော်ခဲ့ရပါတယ်။ ရေအောက်ထဲဆင်းတဲ့အခါ တစ်ယောက်ကို အောက်စီဂျင် tank ၁ လုံးစီသယ်ရပါတယ်။ Tank တွေက မြေပြင်ပေါ်မှာဆို အရမ်းလေးပေမယ့် ရေထဲမှာတော့ ကိုယ့်ကျောပေါ်မှာသယ်ပြီးသွားနေရပေမယ့်လည်း ရေထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရော၊ ပစ္စည်းတွေပါ weightless ဖြစ်တာကြောင့် အဆင်ပြေပြေ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ပြတ်လပ်တာတွေ မဖြစ်အောင် ကိုယ့်အောက်စီဂျင် Level ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ ကိရိယာတွေအဖြစ် ကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့ BCD (Buoyancy Compensator (diving)) မှာပါတော့ ချင့်ချိန်လို့ ရတာပေါ့။ ကိုယ့် oxygen tank ပေါက်တာတို့၊ မမျှော်လင့်ဘဲ ပြတ်လပ်တာတို့ စတဲ့ crisis တွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကိုယ်နဲ့ dive လုပ်တဲ့ instructor ဒါမှမဟုတ် dive buddy ဆီက ဘယ်လို အကူအညီယူရမလဲ၊ crisis ဘယ်လို manage လုပ်မလဲ၊ ကိုယ်ကရော သူများကို ဘယ်လိုအကူအညီပေးရမလဲ ဆိုတာလေးတွေကို ပင်လယ်ထဲ dive မလုပ်ခင်ကတည်းက pool session တွေမှာ သင်ကြားပေးပါတယ်။ ရေအောက်မှာ စကားပြောလို့မရတော့ လက်ဟန်၊ ခြေဟန်တွေနဲ့ communicate လုပ်တဲ့ နည်းတွေလည်း သင်ယူရပါတယ်။ နောက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်ဖော့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Buoyancy control ပေါ့။ လေထဲမှာပျံဝဲလို့မရပေမယ့် အဲဒီခံစားချက်ကို diving လုပ်ခြင်းကနေ အနီးစပ်ဆုံး ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အနက်ထဲကို ရောက်တဲ့အခါ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိရင် coral life တွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာရယ်၊ ပင်လယ်ကြမ်းပြင် ဒါမှမဟုတ် ကြမ်းပြင်အောက်တွေမှာရှိတဲ့ အကောင်တွေနဲ့ အပင်တွေကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ကို ချိန်ပြီးတော့ဖော့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း နည်းပြတွေက သေချာသင်ပြပေးပါတယ်။ Lach join လုပ်ခဲ့တဲ့ Gili Divers ဆိုတဲ့ association က အရမ်းကို responsible diver တွေ၊ နည်းပြတွေ ဖြစ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြေပြင်ပေါ်ကလူတွေ ရေထဲမှာ စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ ပလပ်စတစ်တွေ၊ ပုလင်းတွေ က marine life တွေကို အသက်အန္တရာယ်တွေ အများကြီးပြုတာကြောင့် dive လုပ်တိုင်း အမှိုက်တွေမြင်ရင် ကောက် ကိုယ့်အိတ်ကပ်ထဲတွေထည့်ပြီး မြေပြင်ပေါ်ရောက်ပြီဆို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြတာလေးတွေကို တွေ့တော့ ကျွန်မတို့တွေ marine life ကို preserve လုပ်ဖို့၊ plastic pollution တွေကြောင့် တခြားသူတွေ အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် တာဝန်ယူနေထိုင်တတ်ဖို့ လူတစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုလည်း သင်ယူမိခဲ့ပါတယ်။ Corals တွေ က အရမ်းလှတာကြောင့် လူတွေက အိမ်မှာအလှပြမယ်ဆိုပြီး ဖျက်ဆီးတာတွေ၊ လောဘတက်တာတွေ မဖြစ်ရလေအောင် “Take only photos, leave only bubbles” ဆိုတဲ့ motto လေးက responsible diver တွေကြားမှာ practice လုပ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက “ဓာတ်ပုံတွေတော့ရိုက်ပြီး ယူသွားပါ၊ အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ bubble လေးတွေသာချန်ခဲ့ပါ” လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းနဲ့ ပြောရရင် “corals တွေမယူသွားပါနဲ့၊ ပလပ်စတစ်တွေ မချန်ပစ်ခဲ့ပါနဲ့” ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့။ ဒါလေးတွေလုပ်မှလည်း ပင်လယ်မှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေ မျိုးတုံးတာတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှာလေနော်။ ရင်ခုန်စိတ်လှှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကတော့့ Shark Point မှာ ငါးမန်းတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါးမန်းတွေက သူတို့ကိုသွားမထိခိုက်ရင် လူကို အလိုလိုလာတိုက်ခိုက်လေ့မရှိပါဘူး။ ငါးမန်းတွေအပြင် ဧရာမလိပ်အကြီးကြီးတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ Turtle chasing တွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လိပ်တွေက အင်မတန်ကြီးပေမယ့် သူတို့လေးတွေ ရေထဲမှာသွားလာလှုပ်ရှားပြီး ပျံသန်းနေတာက လိပ်ပြာလေးပျံတဲ့အတိုင်း ပေါ့ပါးအောင်သွားနိုင်တာလေးကိုက အရမ်းကို ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီးရေအောက်ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် နောက်ထပ်အလှတရားကတော့ ရေအောက်ထဲကသင်္ဘောပျက်တွေပါ။ တချို့သင်္ဘောတွေပေါ်မှာဆို coral လေးတွေ form ဖြစ်နေပြီး ငါးလေးတွေ၊ ရေနေသတ္တဝါတွေ အများကြီးရှိနေတဲ့မြင်ကွင်းက အင်မတန်ကြည့်ကောင်းလှပါတယ်။ အမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ ငါးလေးတွေအသိုက်လိုက်သွားနေတာ၊ စရိုက်လက္ခဏာမရိုးနိုင်အောင် စုံလင်လှတဲ့ ရေနေသတ္တဝါတွေမျိုးစုံ၊ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ ရေအောက်ကမ္ဘာရဲ့အလှတရားကိုပါ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာနှစ်ခါရေငုပ်ရတာကြောင့် မတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံနှစ်မျိုးကိုလည်း ခံစားကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရာသီဥတု အရမ်းကောင်းတဲ့နေ့တွေဆို ရေအောက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပြီး visibility က ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ 35 meters လောက်အထိမြင်ရတဲ့ နေ့တွေဆို dive လုပ်ရတာ အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ နေ့ဘက်ဆို နေ့အလင်းကြောင့် ရေအောက်အလှတရားကိုတွေ့ရသလို၊ ညဘက်မှာတော့ ကိုယ်စီ ဓာတ်မီးလေးနဲ့ ရေအောက်ဆင်းရပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်ကျတော့ ကိုယ်မီးထိုးထားတဲ့နေရာလေးပဲမြင်ရပြီး တခြားတစ်ပြင်လုံးက မှောင်မိုက်နေတာကြောင့် dive လုပ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံက နောက်တစ်မျိုးလေးပေါ့။ ညဆိုရင် နေ့မှာမမြင်ရတဲ့ marine life တွေ ထွက်လာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Lach အစက ရေအနက်ကြောက်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ရေအောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ အံ့အားသင့်စရာအရာတွေက ကြောက်စိတ်တွေကို ကျော်လွှားစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံလေးကတော့ ရေအောက်မှာ အသံရဲ့အလျင် ကုန်းပေါ်မှာထက် ၄ ဆမြန်တာကြောင့် ကုန်းပေါ်မှာဆိုအသံကြားရင် အသံဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာကို သိရပါတယ်။ ရေအောက်မှာတော့ အသံကြားရပေမယ့် အသံဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာ မသိရပါဘူး။ နောက်ပြီးရေအောက်ထဲက အပူချိန်က တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ မတူပြန်ပါဘူး။ ရေအနက်ထဲရောက်လေလေ ပိုအေးလေပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်နဲ့အံကိုက်ဖြစ်တဲ့ wet suit တွေ၊ dry suit တွေ ဝတ်ဖို့ကလည်း အရမ်းကို အရေးကြီးပြန်ပါတယ်။ Lach နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ စက်တင်ဘာလ ဒါမှမဟုတ် အောက်တိုဘာလမှာတော့ ကော့သောင်းသွားရင်း scuba diving လုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ အခု scuba diving ၁၀ ကြိမ် လောက်လုပ်ရုံနဲ့တောင် အံ့အားသင့်စရာခံစားချက်တွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့် နောက်ပိုင်းဘယ်နေရာတွေမှာ dive သွားလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားပြီး ကြံစည်နေမိတယ်။ အခုဆို hobby အသစ်တစ်ခု ရသွားပါပြီ။ ရေအောက်ထဲရောက်ပြီဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို tiny, humbled, inspired and salty… all at the same time ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်ကို အရမ်းကြိုက်သွားပါပြီ။ 😀 ဒါကြောင့်မို့ လို့ Slay Queen Lach ရဲ့နောက်ထပ်စွန့်စားခန်းတွေကိုစောင့်ဖတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ ...
ကျွန်တော်ကတော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှုလို့ပဲယုံကြည်တယ်လို့ ပြောတဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဝေလင်း In:Kawi Inspires, Life Hacks, Self Discovery
ကိုဝေလင်းက အသက် (၁၇) နှစ်သာရှိသေးတဲ့ NCC level4ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ Revillux Charity Organization ဆိုတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့လေးကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့လေးက ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှာ အတူစာကျက်ကြရင်း ကလေးချစ်တတ်တဲ့ ကိုဝေလင်းတို့ သူငယ်ချင်းတစ်စု ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကို မြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက် ပရဟိတအဖွဲ့လေးတစ်ခု တည်ထောင်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးကနေ စတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ကိုဝေလင်းကလည်း ဒီအဖွဲ့လေးမှာ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ ပရဟိတပရောဂျက် ၁၂ ခုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း နောက်ထပ် ပရောဂျက်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ စာမေးပွဲမရှိတဲ့အချိန်နဲ့ အားလပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ နောက်ထပ်ပရောဂျက်တွေ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ ကိုဝေလင်းကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုဝေလင်းတို့ အမေရိကန်ပညာတော်သင် အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MYLP (Myanmar Youth Leadership Program) 2018 အဖွဲ့အနေနဲ့ MYLP 2018 Alumni Projects နာမည်နဲ့ ပရောဂျက်တွေကို လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ဒီပရောဂျက်လေး ဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုဝေလင်းက အခုလို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပရောဂျက်ကို ဘယ်ကနေစပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်တာပါလဲ? ဒီအတွက် Inspiration ကရော ဘယ်ကနေရခဲ့တာပါလဲ? ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ အရင်ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျိုင်းတုံမြို့က အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုအတွက် MYLP 2018 ပရောဂျက်ပြီးသွားတော့ ဒီပရောဂျက်လေးကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ဒီပရောဂျက်လေးကို ရွာတစ်ရွာမှာ စာကြည့်တိုက်အသေးလေးတစ်ခု ဆောက်ပေးပြီး ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးချင်တဲ့ စိတ်ကူးလေးကနေ စတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ တာဝန်ယူမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာတွေပေးနိုင်အောင် seminar နှစ်ခုလုပ်ဖို့လည်း ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ စာကြည့်တိုက် ပရောဂျက်လေးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူရဲ့အဖွဲ့သားတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက် ပရောဂျက်လေးကနေ inspire ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ လူတိုင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ သင်ယူမှု၊ တွေးခေါ်နိုင်မှု၊ ယုံကြည်မှုရှိဖို့နဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကြောင့်ပါ။ ဒီပရောဂျက်က ဘယ်လိုလည်ပတ်ပါသလဲ? ပြီးတော့ ဘာတွေလုပ်ပေးတဲ့ ပရောဂျက်လဲ? ကျွန်တော်တို့ပရောဂျက်က စာကြည့်တိုက်ငယ်လေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးပြီး၊ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို seminar နှစ်ခုလုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။ seminar တစ်ခုက ပြည်သူ့နီတိနဲ့ လူငယ်တွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာတွေကို ပိုပြီးနားလည်နိုင်ဖို့ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာပေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟောပြောမယ့်လူတွေကလည်း ဒီနယ်ပယ်တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်လေးကို ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ကတော့ ဒေသခံ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို လေ့ကျင့်ပေးပြီး စာကြည့်တိုက်တစ်ခုကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာနဲ့ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုလည်ပတ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာ သင်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီပရောဂျက်အတွက် ပြင်ဆင်တာနဲ့ အစီအစဉ်ချတာတွေအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပြီး ရ ရက်နေ့၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ သာယာကုန်းရွာ၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့ မှာ အပြီးလုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေရောရှိလား? ကျွန်တော်တို့ အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ၁. ပထမဆုံးကတော့ ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ budget အတိုင်းအတာနဲ့ပဲ ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနိုင်တာပါ။ ၂. ပရောဂျက်အတွက်အစီအစဉ်တွေနဲ့ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် idea တွေအများကြီးကို စဉ်းစားရတာပါ။ ၃. နောက်တစ်ခုကတော့ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးက အလှူရှင်တွေဆီကို အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်သွားပြီး စာအုပ်တွေ၊ ပစ္စည်းတွေကိုအလှူခံရတာပါ။ ပြီးတော့ ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို မပျက်ဆီးအောင် ထိန်းသိမ်းရတာပါ။ ၄. ဒေသခံလူတွေနဲ့ လူချင်းမတွေ့ဖူးဘဲ ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်ရတာကလည်း အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ ၅. နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ အချိန်မလောက်တဲ့ ပြဿနာတွေပါ။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကိုင်ရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံတွေ့ရပါသလဲ? ကျွန်တော်တို့လို မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ လူကြီးတွေရဲ့ သမာရိုးကျ တွေးတတ်တာတွေကြောင့် အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံရဖူးပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ၁. ကျွန်တော်တို့အပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိတာ ၂. အတွေ့အကြုံမရှိတာနဲ့ ၃. အဆက်အသွယ်မရှိတာပါ စတာတွေကို ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေက ကျွန်တော်တို့ ပရောဂျက်လေးဖြစ်မြောက်လာဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူသွားစေပါတယ်။ အခုလိုတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ Gen Z တွေအတွက် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ယူဆထားပါတယ်။ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့လာရင် ဘယ်လိုမျိုးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလေ့ရှိလဲ? ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေကို ကြုံတွေ့လာရတိုင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီး ပြဿနာတွေကိုပြေလည်သွားစေမယ့် အဖြေကိုရှာကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်အမြဲတမ်း Plan A ကအလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ Plan B လုပ်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ တတိယတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို ပြန်တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်အားတက်ကြွအောင်လုပ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ပြဿနာတွေကို ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ပြဿနာတစ်ခုကိုရှင်းပြီဆိုရင် အမြစ်ပါမကျန်အောင်ရှင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ နောက်ပိုင်းတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရော ရှိပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MYLP 2018 အဖွဲ့လေးက အရင်ပရောဂျက်နှစ်ခု လုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီ။ နောက်ထပ် ပရောဂျက်တွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားမှာ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ အားလုံးက Indiana University Bloomington နဲ့ The U.S. Department of States တို့ကနေ ရန်ပုံငွေရရှိထားတာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီး Revillux Charity မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တည်းက ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့တာလည်း အခုထိပါပဲ။ ရန်ကုန် အတွင်းနဲ့အပြင် စုစုပေါင်း charity နဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပွဲ (၁၂) ပွဲကို ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ထပ် ပရောဂျက်တွေကိုလည်း စီစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးသွားဦးမှာပါခင်ဗျာ။ တကယ်လို့ ဒီပရောဂျက်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေမယ်ထင်လဲ? ဒီမေးခွန်းလေးကိုတော့ personal အနေနဲ့ပဲ ဖြေချင်ပါတယ်။ ဒီပရောဂျက်လေးကို လုပ်ဆောင်မနေဖြစ်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အလုပ်နဲ့ လူမှုဘဝကို မျှတအောင်လုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေမှာပါ။ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တာ၊ မိသားစုကိုအချိန်ပေးတာ၊ သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး အေးဆေးနေတာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်တာ၊ အလုပ်လုပ်တာ၊ စာကျက်တာ စတာတွေကို လုပ်ဆောင်နေဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ချမ်းသာတာ၊ အာဏာရှိတာတွေမဟုတ်ဘဲ ပျော်ရွှင်မှုလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်နေသ၍ ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ဘဝကို အဓိပ္ပာယ်ရှိှရှိဖြတ်သန်းနေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ Gen Z လူငယ်တွေအတွက်ပေးချင်တဲ့ စကားလက်ဆောင် ရှိပါသလား? ကျွန်တော်ကတော့ Gen Z တွေအတွက် “ဘဝကတိုတိုလေးပါ။ အတက်အကျ၊ အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်တို့ရဲ့အချိန်တွေကို စာတွေပဲမနားတမ်းကျက်၊ အလုပ်တွေလုပ်၊ facebook သုံး၊ အသေအိပ်နေပြီး မကုန်ဆုံးလိုက်ပါနဲ့။ နိုးထလိုက်ပါ!! သင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ၊ ခရီးထွက်ပါ၊ အောင်ပွဲခံပါ၊ တခြားလူတွေကို ကူညီပါ၊ သဘာဝကို ခံစားပါ၊ သဘာဝကို တန်ဖိုးထားပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝမှာနေထိုင်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အချစ်နောက်ကို မလိုက်ပါနဲ့၊ အမုန်းကိုလည်း သိမ်းမထားပါနဲ့။ ဒါတွေက စိတ်ဖိစီးစေပြီး အသုံးမဝင်ပါဘူး။ သင့်နေရာမှာပဲ သင်စိတ်ဝင်စားပြီးလုပ်ချင်တဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အရာတွေကိုလုပ်ကိုင်နေပါ။ အချစ်ကသူ့ဘာသာသူ ရောက်လာပါလိမ့်မယ် လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လို့ ကိုဝေလင်းက အင်တာဗျူးမှာ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ...
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အင်တာဗျူးရင်း ပြန်ရှာဖွေမယ်။ 🧐🧐🧐 In:Kawi Inspires, Life Hacks, Self Discovery
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ဘာလို့ သေချာသိနေဖို့လိုတာလဲ?? ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုချစ်တတ်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို ပိုသိနိုင်အောင်လို့ပါ။ အဲဒီလိုပိုသိအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?? ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းလေးတွေမေးကြည့်ကြရမှာပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရှက်နေစရာလည်းမလိုပါဘူး။ အရှိကိုအရှိအတိုင်းဖြေနိုင်တာကြောင့်ကိုယ်ဘာတွေလိုနေသလဲ? ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ? ဆိုတာတွေကိုလည်းပိုသိနိုင်ပြီလေ! မေးခွန်း ၁) – ဘာတွေက ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးလဲ??? ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲ?? ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ဆိုရင်တော့ သင်သေချာခေါင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့််မယ်။ စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလဲ သင့်ခံစားချက်အတိုင်းသွားတာထက်စာရင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သင်ရှာတွေ့သွားရင် သင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲ အချိန်ပိုကုန်ဆုံးဖို့ ကြိုးစားပါ! အဲ့ဒီအရာတွေကပဲ သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာစေပြီး ကျေနပ်အားရစရာတွေပေးနိုင်မှာပါ။ ………………………………………………………………………………………………… မေးခွန်း ၂) – သင်သေသွားမယ့်နေ့ကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သင် လုပ်ချင်တာတွေ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေ မဖြစ်သေးခင် သင်သေသွားရတော့မှာလား? အချိန်တွေ နောက်မကျသေးခင် အချိန်ဆွဲမနေဘဲ အခုချက်ချင်းပဲ သင့်အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် သင်အအောင်မြင်ချင်ဆုံးအရာတွေ၊ သင့်ဘဝမှာ ဘယ်လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်ပြီးသွားချင်တာလဲဆိုတာတွေကို အသေအချာသိလာပါလိမ့်မယ်။ ………………………………………………………………………………………………… မေးခွန်း ၃) – ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုး အမှတ်ရနေခဲ့စေချင်လဲ? ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် ကိုယ်သေသွားတဲ့အခါ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကိုတက်ကြွတဲ့သူ၊ စကားပြောကောင်းတဲ့သူစသဖြင့် အမှတ်ရနေစေချင်တယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဖြေကိုသိသွားတာနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် ပိုပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာအောင် နေထိုင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အဲဒီအရည်အချင်းတွေအတိုင်း နေထိုင်မိနေစေမှာပါ။ ………………………………………………………………………………………………… မေးခွန်း ၄) – ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ ပါရမီကဘာလဲ?? သင်ဘယ်နေရာမှာတော်သလဲ? သင့်ရဲ့ goal ကိုအောင်မြင်စေဖို့ အဲဒီအရာတွေကို သင်အသုံးချလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို သင်ကအဲဒီအရာတွေမှာ အများထက်ပိုတော်ပြီး ပါရမီရှိနေလို့ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာအပြည့်အဝယုံကြည်ထားလိုက်ပါနော်။ ………………………………………………………………………………………………… မေးခွန်း ၅) – ကိုယ်ဘာတွေကို စိုးရိမ်နေလဲ?? အဖြေကိုသိသွားတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် နောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးမိနေပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ – ပိုက်ဆံအတွက် စိုးရိမ်သောက ရောက်နေရတယ်ဆိုရင်… ငါဘာဖြစ်လို့ပိုက်ဆံများများမရှာနိုင်တာလဲ? ဘယ်အရာတွေကို ဆင်ခြေအနေနဲ့ ပေးမိနေလဲ ဆိုတာမျိုး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်မေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ပိုက်ဆံများများရှာနိုင်အောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ? ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ? ဆိုတာတွေကို မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ………………………………………………………………………………………………… မေးခွန်း ၆) – ကိုယ်ဘာတွေကို လုပ်ချင်စိတ်ပြင်းပြလဲ? ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဘာတွေကိုလုပ်ရတာကြိုက်လဲ? အခုခေတ်မှာလူတွေအကုန်လုံးက ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရှုပ်နေကြတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ကြားကပဲ အချိန်လေးခဏဖဲ့ပေးပြီး သင်ဘယ်အရာတွေကိုလုပ်ရတာအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာ ရှာဖွေကြည့်နော်! ………………………………………………………………………………………………… မေးခွန်း ရ) – ကိုယ့်ဘဝမှာ ဘယ်အရာတွေကို ကျေးဇူးတင်ရမလဲ? သင့်ကိုချစ်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့ သင့်အနားမှာရှိနေပေးတဲ့သူတွေကိုပေါ့။ အဖြေကိုသိလာတဲ့အခါ အဲဒီလူတွေနဲ့ကုန်ဆုံးရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို ပိုတန်ဖိုးထားတတ်လာပြီး သူတို့နဲ့အတူရှိဖို့ အချိန်တွေပိုပေးတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ………………………………………………………………………………………………… မေးခွန်း ၈) – ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာယုံကြည်ချက်တွေကဘာလဲ? အဲဒီအရာတွေအပေါ် တန်ဖိုးရောထားဖြစ်ရဲ့လား? လူတွေအကုန်လုံးမှာ ယုံကြည်ချက်တွေကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အဲဒီယုံကြည်ချက်က သူများတွေအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်အတွက် တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရင် အဆုံးထိယုံကြည်ပြီး ရပ်တည်လိုက်ပါ။ မေးခွန်း (၈) ခု မေးပြီးတဲ့နောက်မှာ သင်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေ၊ သင့်ရဲ့ဝါသနာတွေ၊ သင့်ဘဝမှာဘာတွေအရေးပါလဲဆိုတာတွေပိုသိလာပြီး ပိုတန်ဖိုးထားတတ်လာတာကြောင့် သင့်ဘဝက ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိလာပြီး ပိုတိုးတက်လာလိမ့်မှာ အမှန်ပါ!!! 🤩🤩🤩 ...
Eric’s Graphic Art In:Kawi Inspires, Self Discovery
ဒီတစ်ပတ် မျှဝေပေးလိုက်တာကတော့ Eric လို့ခေါ်တဲ့ graphic ပန်းချီဆရာပေါက်စလေးရဲ့ လက်ရာလေးတွေပါ။ သူကတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာကို ရူးသွပ်သူတစ်ယောက်ပါ။ နောက်ပြီး သူက ဂီတနဲ့ ပန်းချီအပြင် အချက်အပြုတ်ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို graphic ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Graphic Art တွေကတော့ Eric ရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေပေါ့။ ...
Booklist of the Month In:Kawi Inspires, Self Discovery
ဒီလအတွက် ကဝိရဲ့ Booklist of the Month ကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Booklist ထဲမှာ အချစ်၊ ရာဇဝင်၊ horror နဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကို ထင်ဟပ်နေတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေက စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေက ကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်းပါတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေက သာမန်အချစ်ဝတ္ထုဆိုပေမယ့် တိုက်ဆိုင်လွန်းနေပြန်တယ်။ တချို့စာအုပ်တွေက အမှတ်တရတွေနဲ့… စာရေးဆရာ လင်္ကာရည်ကျော်ရဲ့ “ပန်းဒေါင်း” စာအုပ်လေးကတော့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် အကြောင်းရေးထားတာပါ။ သူမ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာအပြင် ဒီိလိုစိတ်ထားကောင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်မိသွားတဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးသိပ်မကြည့်တတ်တဲ့ သူမတို့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြလဲဆိုတာတော့ စာအုပ်လေးကို ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ “ကိုယ့်ဘဝ အလှငွေလမင်း” ဆိုတာ ဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ ဂီတနဲ့ အချစ်ကိုရူးသွပ်တဲ့ လူငယ်လေးတွေရဲ့ အရင်ခေတ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြလဲဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ဘယ်လိုအသည်းတွေကွဲကြရလဲဆိုတာတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။ ဆရာကြီး ချစ်ဦးညိုရဲ့ “လင်္ကာဒီပ ချစ်သူ” စာအုပ်ကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ အားလုံးသိကြတဲ့ လူကြမ်းကြီး ဒဿဂီရိကို ပြန်သနားသွားလောက်အောင် ပြောင်မြောက်တဲ့အရေးအသားတွေနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ရာဇဝင်စာအုပ်လေးပါ။ အမှန်တော့ ဒဿဆိုတာ လူကြမ်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ကြီးသူပါ။ “သက်တန့်သစ်” ကတော့ သိုးဆောင်းရေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်သည်းဖိုဆန်ဆန် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ ပြဿနာက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ် ကျရောက်လာပါတယ်။ ဒီကောင်မလေးကိုမှ အသက်ထက်ပိုချစ်မိသွားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့… နောက်ဆုံးတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ “စာအုပ်” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ ကဗျာစာအုပ်ဆိုလည်း ဟုတ်သလို၊ စကားပြေစာအုပ်ဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ တချို့နေရာမှာ လက်တွေ့ဆန်သလို၊ တချို့နေရာမှာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေပြန်ပါတယ်။ တစ်မျိုးထူးခြားတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် ကဗျာချစ်သူတွေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တတ်သူတွေ ဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ( ဒီလရဲ့ Booklist of the Month ကို ရွေးချယ်ပေးထားသူကတော့ Ag Nyi ဖြစ်ပါတယ်။ ) ...
အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံလာရင် သင်ဟာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းတတ်တဲ့သူလဲ? In:Kawi Inspires, Self Discovery
တချို့နေ့ရက်တွေမှာ အရာရာတိုင်းက သင့်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင်အလုပ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာမှ လမ်းတွေကရှင်းနေပြီး၊ သင့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကလည်း အလုပ်မလာဖြစ်ဘူးတဲ့လေ။ ဒီတော့ အလုပ်တစ်ခုလုံးက သင့်လက်သင့်ခြေကြီးပဲပေါ့။ ဒီလို ကံကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်တွေလည်း သင့်မှာရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာ သင်မမျှော်လင့်ထားတာတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး အကျႌလေးဝတ်လာတဲ့နေ့မှ စွန်းပေသွားတာမျိုး၊ သင် စတိုင်ကျကျနဲ့ ကျပ်ကျပ်လေးဝတ်သွားတဲ့နေ့မှ အလုပ်တွေအရမ်းများပြီး တစ်ရုံးလုံးပတ်ပြေးနေရတဲ့ နေ့ရက်တွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်တွေရော၊ စိတ်ညစ်ဖွယ်နေ့ရက်တွေပါ ကြုံတွေ့ရမှ ဘဝဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာပါ။ ဒါဆို အောက်ကအဖြစ်အပျက်လေးကိုဖတ်ပြီး တကယ်အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့လာရင် သင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းတတ်လဲဆိိုတာ ခန့်မှန်းလိုက်ပါ… တစ်ရက်မှာ သင်စားနေကျ ဒိုးနတ်ဆိုင်ကနေ ဂျယ်လီဒိုးနတ်လေးတစ်ခုကို ဝယ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး သင်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဒိုးနတ်လေးကိုကိုက်စားလိုက်တဲ့အချိန် သင်တစ်ခုသတိထားမိသွားတာက အဲဒီဂျယ်လီဒိုးနတ်မှာ ဂျယ်လီမပါလာခဲ့ဘူးဆိုတာကိုပါ။ ဂျယ်လီဒိုးနတ်လို့ပြောပြီး အထဲမှာ ဘာမှမပါတဲ့ဒိုးနတ်ကို ဘယ်လိုခေါ်လို့ရမလဲ? စိတ်ညစ်စရာ surprise တစ်ခုလို့ပဲပြောရပါ့မလား… ဒါဆို သင်ဒီလိုကံမကောင်းမှုသေးသေးလေးနဲ့ကြုံရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလဲ? ၁။ ဒိုးနတ်လေးကို ဆိုင်ပြန်ယူသွားပြီး၊ အသစ်တစ်ခုပြန်လဲမယ်။ ၂။ ဒီလိုအရာတွေက ဖြစ်နေကျပါပဲလို့တွေးပြီး ဂျယ်လီမပါတဲ့ ဒိုးနတ်လေးကိုပဲ ဆက်စားလိုက်မယ်။ ၃။ ဒိုးနတ်ကိုထားပြီး တခြားမုန့်တစ်ခု ပြောင်းစားလိုက်မယ်။ ၄။ ဒိုးနတ်အလွတ်လေးကိုပဲ ယိုတစ်ခုခုထည့်ပြီး စားလိုက်မယ်။ …………………………………………………………………………………………….. ၁။ ဒိုးနတ်လေးကို ဆိုင်ပြန်ယူသွားပြီး၊ အသစ်တစ်ခုပြန်လဲခိုင်းမယ်။ ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင်က ကိစ္စတစ်ခုကို စိတ်အေးအေးထားပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တွေးတတ်သူတစ်ဦးပါ။ အခြေအနေတစ်ခုက ဘယ်လောက်ပဲထူးဆန်းနေပါစေ သင်က စိုးရိမ်ထိတ်လန့် နေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပြဿနာတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဖြေရှင်းတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် သင်ကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရတာကို သဘောမကျပါဘူး။ အဲဒီအစား သင်က သင့်ရဲ့အတွေးတွေကိုသုံးပြီး ခေါင်းဆောင်တွေကို အထောက်အကူပြုကူညီပေးတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ …………………………………………………………………………………………….. ၂။ ဒီလိုအရာတွေက ဖြစ်နေကျပါပဲ လို့တွေးပြီး ဂျယ်လီမပါတဲ့ ဒိုးနတ်လေးကိုပဲ ဆက်စားလိုက်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင်ကအကောင်း၊ အဆိုးအားလုံးကို လက်ခံတတ်သူတစ်ဦးပါ။ သင့်ရဲ့ အရာရာကိုလက်ခံတတ်တဲ့စိိတ်နဲ့ သည်းခံတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဆို သူတို့ကိုအမြဲတမ်းတစ်စုတစ်စည်းတည်းနဲ့ အဖွဲ့ကိုခိုင်မြဲစေတဲ့သူတစ်ယာက်ပေါ့။ သင်ကဘယ်အရာကိုမှ အထူးတလည် ဂဂျီဂဂျောင်မကျတတ်တာကြောင့် အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင် အဖွဲ့ထဲမှာသင်ရှိနေမှန်းတောင်သတိထားမိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရရင် သင်က လေလိုပါပဲ သင်တကယ်မရှိတော့တဲ့ တစ်နေ့မှ သင့်ကိုသတိထားမိကြမှာပါ။ …………………………………………………………………………………………….. ၃။ ဒိုးနတ်ကိုထားပြီး တခြားမုန့်တစ်ခု ပြောင်းစားလိုက်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင်ကဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဦးဆောင်တတ်ခြင်းက သင့်ရဲ့မွေးရာပါအစွမ်းတစ်ခုပေါ့။ သူများတွေ တစ်စုံတစ်ခုမှာအခက်တွေ့နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတောင် ဘာမှရှည်ရှည်ဝေးဝေးမစဉ်းစားဘဲ သင်ကဝင်ပြီး ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပေးတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ နောက်ပြီး သင်ကတွေဝေနေတတ်သူတစ်ဦးမဟုတ်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်သွားမယ်ဆိုလည်း ဘာသွားစားမယ်၊ ဘယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကအစ သင်ကပဲဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်နေကျလေ။ သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့စိတ်ကြောင့် သင့်အနားမှာရှိတဲ့သူတွေက သင့်စကားတွေဆို ယုံယုံကြည်ကြည်နားထောင်လေ့ရှိပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………….. ၄။ ဒိုးနတ်အလွတ်လေးကိုပဲ ယိုတစ်ခုခုထည့်ပြီး စားလိုက်မယ် ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင်ကတီထွင်ကြံဆတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ထဲမှာဆိုလည်း သင်ကဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါ။ သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်က သူများတွေအခက်အခဲလို့ မြင်တဲ့အရာတွေကို သင်က အခွင့်အရေးလို့မြင်ပြီး အကြံဉာဏ်အသစ်တွေထုတ်တတ်တာပါပဲ။ သင့်ရဲ့ တီထွင်ကြံဆမှုတွေကြောင့် တစ်ခါတစ်လေကျရင် သင်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ သင့်အနားကသူတွေက သင့်ရဲ့ အတွေးတွေကို ယုံကြည်ပြီး တစ်ခုခုဆို အမြဲတမ်းသင့်ကိုပဲအားကိုးမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်လုပ်လိုက်တဲ့ အရာတိုင်းက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ပျော်ဖို့ကောင်းလို့ပါ။ ...
တရားရုံးဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့ အကြောင်း In:Kawi Inspires, Self Discovery
တရားစီရင်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာဆို အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင် မျက်မြင်သက်သေတွေသုံးပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ ရှေ့နေတွေ၊ တရားစီရင်လိုက်တိုင်းကြားရတဲ့ ကျောချမ်းစေလောက်တဲ့တူသံရယ် နောက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်မှာကြားရတဲ့ စကားသံတိုးတိုးလေးတွေ စတဲ့အရာတွေဟာ တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် တရားစီရင်တယ်ဆိုတာ တိုက်ပွဲတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဆိုင်းတွမှုတွေ၊ မျက်မြင်သက်သေတွေနဲ့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ကြားမှာ အမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြသလို ဥပဒေနဲ့ တရားမျှတမှုဆိုတာကလည်း တစ်ခါတစ်လေ ဒီတိုက်ပွဲသေးသေးလေးတွေကြားမှာ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြတယ်လေ။ ဒါဆို သင်သာ တကယ်လို့ ဒီလိုဥပဒေရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ သရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေထဲက သင့်ကိုယ်သင်ဘယ်နေရာမှာသရုပ်ဆောင်နေမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?? ၁. ရှေ့နေ ၂. စုံထောက် ၃. တရားခံ ၄. မျက်မြင်သက်သေ အဖြေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားလုံးအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ မျက်နှာဖုံးတစ်ခုတပ်ထားလိုက်သလိုပါပဲ။ တကယ့်ပြင်ပလောကကို ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် သုံးတဲ့မျက်နှာဖုံးတစ်ခုပေါ့။ အဲဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လို့တွေးလိုက်တာနဲ့ သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဇာတ်ကောင်ပုံစံကို သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြစ်ခွင့်ရတာပေါ့။ နောက်ပြီး တရားရုံးဇာတ်ဝင်ခန်းဆိုတော့ ပိုပြီးတုန်လှုပ်စရာကောင်းသလို စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်လေ။ နောက်တစ်ခုက သင်ရွေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးတွေက သင်အရေးကြုံလာတဲ့အခါတိုင်း တုံ့ပြန်တတ်တဲ့သင့်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရွေးပြီးရင်တော့ အောက်ကအဖြေလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အရေးကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာ သင်ဟာဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရင်ဆိုင်တတ်တဲ့သူလဲဆိုတာကို အဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါ။ ၁. ရှေ့နေ သင့်ကိုယ်သင် ရှေ့နေတစ်ယောက်နေရာကနေ မြင်မိတယ်ဆိုရင်တော့… ပုံမှန်ဆို သင်ကဘယ်ကိစ္စကိုမဆို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ရင်ဆိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ အခက်အခဲတွေအကြောင်း သူများကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပေးမသိတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းဖိအားများပြီး ခက်ခဲလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို သင်ဟာ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ ဖိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် ချက်ချင်း ပြောင်းလဲပြီး ကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလို အေးဆေးပြီး အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ် ရှိနေတတ်သလို ဖိုက်တာတစ်ယောက်လိုမျိုးလည်း အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့သင်ဟာ အရမ်းခက်ခဲတဲ့အချိန်မျိုးတွေကိုတောင် ကောင်းကောင်း ဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ၂. စုံထောက် သင်က စုံထောက်ကိုရွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့… သင်ဟာကိစ္စတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးမပေးတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူများတွေကဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုပြီး ထားခဲ့လိုက်ရင်တောင် သင်ကလက်မလျှော့လိုက်ဘဲ ဆက်လက်ကြိုးစားလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့လည်း လူတွေကသင့်ကိုလေးစားပြီး သူတို့အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါတိုင်း သင့်ဆီမှာအကူအညီလာတောင်းလေ့ရှိကြတာလေ။ ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း သင့်ဆီအမြဲလာတတ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ ဇွဲရှိမှုကြောင့် သင်သူတို့ရဲ့ ပြဿနာတွေကိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်သလို သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ပိုပြီးသန်မာလာမှာပါ။ ၃. တရားခံ သင်ဒီဇာတ်ကောင်နေရာကို ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့… သင်က ထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ လူတွေတော်တော်များများက တရားခံဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာကို မရွေးချယ်ချင်ကြပါဘူး။ သင်က အပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင် သန်မာပြီး အေးဆေးတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ သင်ကပြဿနာတစ်ခုကို အဆုံးထိမတွေးတတ်တာပါ။ များသောအားဖြင့် ပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင် သင်ကပြဿနာကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာစဉ်းစားမယ့်အစား သင့်ကိုယ်သင် ငါဘာမှားနေလို့လဲ၊ ငါမှန်နေတယ်လေ စတဲ့အတွေးတွေကို အရင်စဉ်းစားမိတာကြောင့်ပါ။ နောက်ပြီး သင်ကဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင်ထက် ပိုလက်တွေ့ကျပြီး ပိုတော်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို သင့်အတွက် ဖြေရှင်းပေးဖို့ချဉ်းကပ်တတ်ပါတယ်။ ၄. မျက်မြင်သက်သေ သင်ဒီဇာတ်ကောင်ကိုရွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့… သင်ဟာ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် အရာရာမှာပူးပေါင်းပါ၀င်တတ်ပြီး ကူညီတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို နောက်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ရက်ရောတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် တခြားသောနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သင်က လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေအောင် အမြဲနေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆ်ိုတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ လိုက်လျောပေးတာတွေများပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အမှတ်အသားပါ ပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လူတွေအနေနဲ့ သင့်ကိုယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ မြင်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ လုပ်ရမှာက လူတွေအမြင်မှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တကယ်အရေးကြီးတာက သင့်ကိုယ်သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိနေဖို့ပါပဲ။ ...
သင့်မှာရှိနေတဲ့ အားနည်းချက်တွေကို Cinderella ပုံပြင်လေးကနေ ဖော်ထုတ်ကြည့်ရအောင်! In:Kawi Inspires, Self Discovery
ဆင်းရဲနိ်မ့်ကျတဲ့ဘဝကနေ ကံကြမ္မာရဲ့ အလှည့်အပြောင်းကြောင့် လှပပျော်ရွှင်ပြီး အေးချမ်းသာယာတဲ့ဘဝကို ရောက်ရှိသွားကြတဲ့ မင်းသမီးပုံပြင်တွေထဲမှာဆို Cinderella မင်းသမီးလေးပုံပြင်ကို အားလုံးလည်းသိကြမှာပါ။ အောက်မှာတော့ ဒီပုံပြင်ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ သင့်စိတ်ထဲမှာ ချက်ချင်း ထင်းကနဲပေါ်လာတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကိုရွေးပါ။ ရွေးပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံလေးတွေထဲမှာ ကိုယ့်အဖြေကို သွားရှာဖတ်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ အားနည်းချက်က ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ကြည့်လိုက်နော်! ၁။ Cinderella လေး သူ့မိထွေးကြီးရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေခံနေရတဲ့အခန်း။ ၂။ နတ်သမီးကြီးက Cinderella လေးကို အရမ်းလှတဲ့မင်းသမီးလေးအသွင် ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အခန်း။ ၃။ Cinderella လေး ညဆယ့်နှစ်နာရီအမီ အိမ်ကိုအပြေးပြန်နေရင်း နန်းတော်ကြီးရဲ့ လှေကားမှာ ဖန်ဖိနပ်လေးတစ်ဖက် ကျကျန်ခဲ့တဲ့အခန်း။ ၄။ နောက်ဆုံးမှာ မင်းသားလေးက ဖန်ဖိနပ်ပိုင်ရှင် Cinderella မင်းသမီးလေးကို ရှာတွေ့သွားတဲ့အခန်း။ ၁။ Cinderella လေး သူ့မိထွေးကြီးရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေခံနေရတဲ့ အခန်း။ ဒီစာသားလေးကိုဖတ်မိတာနဲ့ သနားစရာ Cinderella လေး သူ့မိထွေးကြီးနဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ညီအစ်မဝမ်းကွဲတွေရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကိုခံရင်း ကြမ်းတိုက်နေတာကိုပြေးမြင်မိပြီး သနားမိတယ်ဆိုရင်တော့ သင်က သနားတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သနားတတ်တဲ့ နောက်တစ်ဖက်မှာက မာနနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သူတို့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း အော်… ငါ့ဘဝက သူတို့ထက်သာပါလား ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ သင်ဒီအခန်းလေးကိုမှတ်မိနေတာပါ။ အခုလိုမျိုး သူတစ်ပါးကိုသနားတတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သူများတွေထက်တော့သာပါတယ်လို့ တွေးတတ်တာကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့သနားစိတ်ကပိုများလာလေလေ တစ်ဖက်မှာလည်း မာနစိတ်က တိုးလာလေလေပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ မဖြစ်သင့်တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပြောင်းလဲမှုတွေပါ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ၂။ နတ်သမီးကြီးက Cinderella လေးကို အရမ်းလှတဲ့မင်းသမီးလေးအသွင် ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အခန်း။ ပုံပြင်လေးထဲမှာ နတ်သမီးကြီးက သူ့ရဲ့မှော်တုတ်တံလေးကို ဝှေ့ရမ်းလိုက်ပြီး Cinderella လေးကို သိပ်လှတဲ့မင်းသမီးလေးအဖြစ် ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ ဘယ်အရာကမှ အဲ့လောက်မလွယ်ကူပါဘူး။ သင့်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအမှားတွေကတော့… သူများတွေရဲ့ အမှား ဒါမှမဟုတ် ပုံပြင်လေးထဲကလို မိထွေးမိသားစုက ရက်ရက်စက်စက်နဲ့ အနိုင်ကျင့်လိုက်လို့ Cinderella လေးရဲ့ ဂါ၀န်စုတ်ပြဲသွားသလို ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းလေ့လာမှုမှာ အားနည်းတာ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှာ အားနည်းတာနဲ့ ပေါ့ဆတတ်တာတွေကြောင့်ပါ။ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ သင့်မှာ Cinderella လေးလို အရေးအကြောင်းကြုံလာတဲ့အခါ လာကူညီပေးမယ့် နတ်သမီးကြီး မရှိပါဘူးဆိုတာကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင်ဒီအခန်းလေးကိုရွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့ ဘာပဲလုပ်လုပ်အရင်စဉ်းစားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ပါလို့ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၃။ Cinderella လေး ညဆယ့်နှစ်နာရီအမီ အိမ်ကိုအပြေးပြန်နေရင်း နန်းတော်ကြီးရဲ့ လှေကားမှာ ဖန်ဖိနပ်လေးတစ်ဖက် ကျကျန်ခဲ့တဲ့အခန်း။ ဒီအခန်းလေးကို အထူးတလည်မှတ်မိနေတာကတော့ အရာတစ်ခုအပေါ်ကို အမြဲအားကိုးတတ်တဲ့ သင့်ရဲ့ မှီခိုလိုစိတ်ကြောင့်ပါ။ Cinderella လေးလိုမျိုး ညသန်းခေါင်ကြီးလှေကားပေါ်ကပြေးဆင်းရင်း ဖိနပ်လေးကျန်ခဲ့တာက ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကိစ္စရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နောက်ဆက်တွဲတွေအနေနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကို တခြားတစ်ယောက်က လိုက်ဖြေရှင်းနေရတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ ဥပမာ – ကျန်ခဲ့တဲ့ဖိနပ်ပိုင်ရှင်ကိုရှာဖို့အတွက် မင်းသားလေးသာမက သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပါအလုပ်ရှုပ်ကြရတယ်လေ။ ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် သင်ထားခဲ့သမျှပြဿနာတွေကို တခြားသူတွေက လိုက်ရှင်းပေးနေတယ်ဆိုတာ လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့်လည်း တစ်ချိန်မှာတော့ သင်ရှောင်လွှဲလို့မရတော့ဘဲ ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရမယ့် နေ့ရက်တစ်ခုကိုရောက်လာမှာပါ။ ၄။ နောက်ဆုံးမှာ မင်းသားလေးက ဖန်ဖိနပ်ပိုင်ရှင် Cinderella မင်းသမီးလေးကို ရှာတွေ့သွားတဲ့အခန်း။ လူတိုင်းလူတိုင်းက ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဇာတ်သိမ်းခန်းတွေကို သဘောကျကြတယ်လေ။ သင်ဒီအခန်းလေးကိုရွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့ သင်လည်းအပါအဝင်ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါကတော့ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ပါပဲ။ အရာတစ်ခုကို ရိုးရိုးလေးနဲ့ လွယ်လွယ်လေးလက်ခံတတ်တဲ့အကျင့်ပေါ့။ ဒီလိုစိတ်ရှိတဲ့သူတွေက ဘဝမှာဆိုလည်း သာမန်အလုပ်၊ သာမန်လစာ၊ သာမန်အပေါင်းအသင်းတွေ၊ သာမန်မိသားစုလေးနဲ့ ကျေနပ်နေပြီး ဘဝကို သက်သောင့်သက်သာ သာမန်ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းလေး ဖြတ်သန်းချင်တဲ့သူတွေပေါ့။ အဲလိုဆိုရင်တော့ သင်ဒီအကျင့်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ဘယ်အရာကိုမဆို လွယ်လွယ်နဲ့ သက်သောင့်သက်သာရတာကို မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ သင့်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့ အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ပါ။ ဒါမှ သင်ပိုပြီးတိုးတက်လာမှာပါ။ ...